किन कायम छ छाउपडी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
किन कायम छ छाउपडी ?
कार्तिक २३, २०७६ नरेन्द्र मिश्र
‘पाँचौं दिन चोखिन्छु भनेर औधी खुसी थिई, आगो बालेर सुतेकी रहिछ । विचरी सधैंको लागि आँखा चिम्लेर गई’, डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ की २१ वर्षीया बुहारी पार्वती बोगटीको आफ्नो घरभन्दा केही परको सानो खाली घरमा छाउ बस्दा निसास्एिर मृत्यु भएपछि उनकी सासू लक्ष्मी बोगटीले व्यक्त गरेको दुखित, भावपूर्ण र मार्मिक भनाइ हो, यो ।
त्यस दिन झरी परेर ओसिएको सानो कोठामा आगो तापेर एक्लै सुतेकी पार्वतीको निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो (कान्तिपुर, १९ माघ २०७५) । नेपालको सुदूर र मध्यपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाका गाउँमा छाउपडी प्रथा अझै कायम छ । महिलाले रजस्वला वा महिनावारीको बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक सामाजिक नियम छ । त्यसबेला महिलालाई पूर्णरूपमा अछूत (अपवित्र) भएको मानिन्छ । र सोही अनुरुप महिलाले छाउगोठमा बसी अनिवार्य छाउपडी प्रथा पालना गरुन् भन्ने सामाजिक चाहना पाइन्छ । यसले गर्दा छाउ बार्ने क्रममा महिलाको अकालमा मृत्यु हुनुका साथै पारिवारिक/सामाजिक सम्बन्धहरू पनि खलबलिरहेको छ ।
कानुनी रूपमा छाउपडी सामाजिक कुप्रथाको रूपमा परिभाषित भइसकेको छ । तापनि यो प्रथा सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी लगायत केही जिल्लामा कायमै छ । त्यसमा पनि स्थानीय जनमानसमा छाउपडी प्रथा बुझ्ने, पालना गर्ने र गराउने आफ्आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यता छन् । यो प्रथालाई बाह्य परिवेशबाट बुझ्ने र व्याख्या गर्ने शैली भने फरक पाइन्छ । त्यसैले छाउपडी प्रथासँग जेलिएका तर्क, वितर्क र सामाजिक सवालका प्रश्नहरू हामीमाझ धेरै छन् । किन छाउपडी प्रथाले हाम्रो आफ्नो घर, परिवार, आफन्त, छरछिमेक वा समाजका महिलालाई अझसम्म पनि पछ्याइरहेको छ ? के यो प्रथासँग टाँसिएर बसेका हाम्रा परम्परागत धार्मिक मान्यताहरू त बढी जिम्मेवार छैनन् ? अनि किन अन्य जिल्लामा महिनावारी बार्ने तर छाउगोठमा बस्ने प्रचलन छैन ? यो प्रथालाई हामी हाम्रो समाजबाट तत्काल हटाउन सक्छौं कि सक्दैनौं ?
समाज र महिनावारी
नेपाली समाजको बनावट र चरित्र फरक छ । त्यसैले यहाँका विभिन्न जातजाति, जनजाति, समूह, समुदाय वा समाजमा महिनावारी बार्ने/नबार्ने आ–आफ्नै प्रचलन छन् । कुनै समुदाय र स्थानमा महिनावारी बारिँदैन भने कुनैमा लचिलो त कुनैमा कठोरतासाथ बार्ने प्रचलन छ । जस्तो कि विशेषत: सहरी समाजमा महिनावारी आफ्नै घरभित्रको सुरक्षित वातावरणमा बारिन्छ भने कर्णालीका गाउँहरूमा छाउगोठमा । त्यसैले महिनावारीप्रतिका धारणा पनि आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा, भू–बनोट, परिस्थिति र समाज अनुसार फरक–फरक हुने गर्छ । महिनावारीप्रतिको सामाजिक/सांस्कृतिक धारणा सबै समुदायमा एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने छैन । यो त समाजको उद्विकास वा समाज विकास सँगसँगै विशेष परिस्थिति, कालखण्ड र स्थानहरूमा समाजले नै उत्पादन र आकार दिएका सामाजिक नियम, व्यवहार, मूल्य–मान्यता मात्र हुन् ।
परिणाम, नेपाली समाजमा महिनावारीप्रतिका धारणा कतै खुकुलो त कतै कसिलो भएर बसेको छ ।
पितृसत्ता र महिनावारी
छाउपडी प्रथा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुनै निश्चित समयरेखा पाइँदैन । यद्यपि विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानका आधारमा मानवको स्थायी बसोबासको सुरुको अवस्था र कृषियुगको थालनीसँगै विभिन्न धार्मिक, सामाजिक मूल्य–मान्यता परिपक्व हुँदै आएको पाइन्छ । यसै क्रममा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले समाजमा पकड जमाउँदै गर्दा उत्पादन प्रणालीमाथिको स्वामित्व, शक्तिको प्रयोग, पारिवारिक निर्णायक भूमिका र धार्मिक कार्यमा पुरुषको सर्वोच्चता कायम हुँदै गयो । जतिजति समाजमा महिनावारीप्रतिका पितृसत्तात्मक धारणाहरू बढ्दै गए, त्यति नै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि साँघुरिँंदै गयो । महिलाको शरीरसँग जोडिएका शुद्धता र अशुद्धताको धार्मिक/सांस्कृतिक मान्यताहरू स्थापित हुँदै गए । यसले गर्दा महिनावारी बार्ने वा छाउपडी प्रथा कायम हुनपुग्यो ।
महिनावारी महिलामा हुने एक अनिवार्य जैविक र स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि यसमा धर्म, विश्वास, आस्था र सामाजिक जीवन पनि त्यतिकै गाँसिएको छ । त्यसैले महिनावारी हुँदा महिलाको प्रकृति, जल, बोटबिरुवा, जनावरका साथै मानिस/मानिस बीचको सम्बन्धलाई पवित्र र अपवित्र भएको मानेर सोही अनुसारको सामाजिक व्यवहार गरिन्छ । पवित्र र अपवित्रको भावना, सोच, अवधारणा र व्यवहार पनि समाजकै उत्पादन हो । किनभने अपवित्रलाई पवित्र बनाउने विधि पनि हाम्रै समाजसँग छ, जो समाजले नै निर्माण गरेको हो । जस्तो कि महिनावारीपछि शुद्ध हुनलाई नुहाउने, कपडा धुने र विभिन्न वस्तु तथा स्थानलाई गहुँत/सुनपानी छर्केर पवित्र बनाउने आदि गरिन्छ ।
निषेध, धर्म र सामाजिक संरचना
यतिबेला हाम्रा गाउँ, सहरमा छाउपडीप्रतिका दुइटा धारणा पाइन्छ । जसमा छाउ बार्ने र निषेधात्मक कार्यले महिलालाई महिनावारीका बेला आराम मिल्नुका साथै मनो–सामाजिक सन्तुष्टि प्रदान गर्छ भन्ने छ । किनभने यस समयमा घरभित्रका साथै केही बाहिरका काम गर्न महिलालाई निषेध गरिएको हुन्छ । यो परापूर्व कालदेखि मानिँदै आएको धार्मिक परम्परा हो भन्ने धारणा छ । तर यी तर्क विशेषत: ग्रामीण समाजका पुरानो पुस्तामा बढी पाइन्छ । छाउ बार्नुलाई सामाजिक विभेद, असमानता र अन्यायसँग गाँसिएको पक्ष बलियो छ । परिणाम सामाजिक सन्तुष्टिभन्दा पनि पीडादायी दैनिकी, व्यवहार र अनुभूतिहरू बढी छन् । महिनावारी बार्न छाउगोठमा बस्दा महिलाले निसास्एिर मृत्यु, जंगली जनवारको आक्रमण, सर्पको टोकाइ, कमजोर स्वास्थ्य अवस्थादेखि बलात्कारसम्मका घटना भोग्नुपरेको छ । महिनावारी हुँदा महिलालाई उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, बोटबिरुवा, पाठपूजा, लत्ताकपडा, भान्छाकोठादेखि दैनिक क्रियाकलापसम्म बन्देज लगाएका घटना छँदैछन् ।
धर्म, विश्वास र सामाजिक संरचना
किन विभिन्न निकाय तथा संघ/संस्थाहरूको छाउपडी न्यूनीकरणको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन ? यसका मुख्य तीन कारण देखिन्छन् । पहिलो, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना जहाँ पुरुषप्रधान सामाजिक मूल्य–मान्यताले उच्च स्थान पाइरहेको छ । दोस्रो, शिक्षाको सामाजिक प्रभावमा कमी हुनु वा शिक्षाले स्थानीय सामाजिक जीवनशैलीलाई समेट्न नसक्नु पनि हो । यसले गर्दा हामी शिक्षाको माध्यमबाट गढेर बसेका अन्धविश्वास, अदृश्य शक्ति र कुप्रथाहरूलाई समाजबाट पन्छाउन सकिरहेका छैनौं । तेस्रो, अभौतिक संस्कृतिमा आएको सुस्त परिवर्तन पनि हो । यसको अर्थ हाम्रो ज्ञान, सोच, विचार, मान्यता आदिलाई समय अनुसार बदल्न सकिरहेका छैनौं । जस्तो कि एउटै घरभित्र बसेर छाउबारे देउता रिसाउँछन्, वंश नाश तथा पारिवारिक क्षति हुन्छ, सामाजिक सम्बन्धहरू बदलिन्छन् वा अनिष्ट हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यताले हामीलाई अझसम्म पनि छोड्न सकिरहेको छैन । त्यसैले राज्यले कुप्रथाको रूपमा परिभाषित गरे पनि जानी–नजानी छाउपडी प्रथा अँगालिरहेका छौं ।
भनिन्छ, जहाँ महिला र पुरुषको हैसियतलाई समान मानिन्छ, त्यहाँ महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा र दमन आफै कम भएर जान्छ । त्यसैले हामीले बुझ्ने समृद्धिमा विशाल भौतिक संरचनाको निर्माण, सहरहरूको विस्तार, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र सडकहरूको निर्माणमात्र नभई समृद्धि त व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा भनौं समाजमा रहेका प्रत्येक नागरिकले अनुभूत गर्ने सुख र खुसीसहितको समाज निर्माण गर्नु हो । यसको अर्थ हामीमा भएका अन्धविश्वास, कुप्रथा, कुसंस्कार, विभेद, सामाजिक अन्यायलाई अन्त्य गर्नु पनि हो । त्यसका लागि छाउपडी प्रथासँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ । तत्कालीन योजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्थाका साथै लैंगिकमैत्री पारिवारिक जनचेतना बढाउनुपर्छ भने दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत नयाँ पुस्तालाई छाउपडी प्रथाको वस्तुपरक विश्लेषण गर्नसक्ने धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सामाजिकीकरणको खाँचो छ ।
मिश्र रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा समाजशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख हुन् । प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:४५
मधुमेहले आँखामा पार्ने असर
कार्तिक २३, २०७६ डा. रबा थापा
मधुमेह नसर्ने रोग हो । यो संसारभरि नै विकराल स्वास्थ्य समस्याको रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अल्पविकसित मुलुकहरूमा मधुमेहबाट प्रभावितहरूको संख्या धेरै देखिएको छ । त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रमा यो संख्या निकै बढेको पाइन्छ ।
नेपालमा मधुमेह एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । हाल करिब १० लाख मधुमेहबाट प्रभावित भएको अनुमान छ । सहरी क्षेत्रमा यो रोग बढी देखिएको छ ।
मधुमेहले शरीरका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अंगहरूमा असर पुर्‍याउँछ । खास गरेर मृगौला, आँखा, मुटु, दिमाग, नसा र खुट्टाहरूमा मधुमेहको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्छ । मधुमेह भएकाहरूलाई आँखाको समस्या अन्यको तुलनामा दुई गुण बढी हुन्छ भने अन्धोपनको समस्या २५ औं गुणा बढी हुन्छ ।
मधुमेहले आँखाको प्राय: सम्पूर्ण भागमा असर पुर्‍याउँछ । तर पनि यो रोगका बिरामीमा मात्र देखिने असर ‘डाइबेटिक रेटिनोपेथी’ले आँखाको भित्री भागमा रहेको दृष्टि पर्दामा समेत असर पुर्‍याउँछ ।
मधुमेहले खासगरी शरीरका रक्तनलीहरूमा असर गर्छ । आँखाको पनि भित्री भागमा रहेको स्नायु तन्तुले बनेको पारदर्शी झिल्ली जसलाई दृष्टि पर्दा (रेटिना) भनिन्छ, यस भागको रक्तनलीमा मधुमेहले असर पुर्‍याउँछ । रक्तनलीमा असर गर्न थालेपछि रेटिनामा रक्तस्राव हुने, मुख्य रेटिनाको देख्ने भाग सुन्निने र नयाँ हानिकारक रक्तनलीको विकास भई आँखाभित्र अत्यधिक रक्तस्राव हुन थाल्छ । यदि समयमै उपचार नभएको खण्डमा रेटिना खुम्चने र अन्त्यमा आँखाको दृष्टि पूर्णरूपमा बिग्रन्छ । मधुमेहले आँखाको रेटिनामा पुर्‍याउने यिनै असरलाई ‘डाइबेटिक रेटिनोपेथी’ भनिन्छ ।
डाइबेटिक रेटिनोपेथी हुँदा सुरुको अवस्थामा बिरामीमा कुनै पनि लक्षण देखिँदैनन् । रेटिनामा निकै क्षति भइसकेपछि मात्र आँखा देख्न विस्तारै धमिलो हुने गर्छ । आँखामा धेरै रक्तस्राव हुँदा एक्कासी आँखा धमिलो हुने र आँखा अगाडि छायाजस्तो देखापर्छ ।
डाइबेटिक रेटिनोपेथीले आँखाको रेटिनामा एकपटक धेरै असर गरेपछि उपचारपश्चात पनि पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । मधुमेहका बिरामीमध्ये करिब एक तिहाइलाई डाइबेटिक रेटिनोपेथीको समस्या देखिन्छ भने तिनीहरूमध्ये करिब एक तिहाइलाई तुरुन्त आँखा उपचारको आवश्यकता हुन्छ ।
मधुमेह बढ्दै जाँदा डाइबेटिक रेटिनोपेथीको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । मधुमेह भएको २० वर्षमा पहिलो प्रकार (३० वर्ष अगाडि देखापर्ने मधुमेह) को मधुमेहका प्राय: सबै बिरामीलाई डाइबेटिक रेटिनोपेथी देखापर्छ भने दोस्रो प्रकारको मधुमेह (३० वर्षपछि देखापर्ने मधुमेह) करिब दुई तिहाइ बिरामीलाई देखा परिसकेको हुन्छ । मधुमेह पत्ता लाग्दासमेत विकसित मुलुकका करिब ५ प्रतिशत बिरामीलाई डाइबेटिक रेटिनोपेथी देखापरेको अध्ययनले देखाएका छन् । हाम्रो देशमा यो संख्या अझ बढी पाइएको छ । यसको प्रमुख कारण मधुमेह समयमै पत्ता नलागी रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा नहुनु नै हो ।
रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा नहुनेहरू, उच्च रक्तचाप भएकाहरू र रगतमा खराब चिल्लोको मात्रा बढी हुनेहरूलाई डाइबेटिक रेटिनोपेथी छिटो देखापर्छ । त्यस्तै रक्तअल्पताको समस्या, मृगौलाको समस्या, गर्भावस्थाको समय र धूमपान गर्नेहरूमा डाइबेटिक रेटिनोपेथी बढी देखिन्छ ।
त्यसैले यी व्यक्तिहरूको विशेष सावधानी राख्नुपर्ने हुन्छ भने रोगको पनि उपचार गरी नियन्त्रण राख्नु जरुरी हुन्छ । मधुमेहले निम्त्याउने डाइबेटिक रेटिनोपेथी अन्धोपनको एक प्रमुख कारण हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल अन्धोपनमध्ये ४.८ प्रतिशत डाइबेटिक रेटिनोपेथीकै कारण हुन्छ । विकसित मुलुकहरूमा समेत काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा अन्धोपनको प्रमुख कारण डाइबेटिक रेटिनोपेथी भएको पाइएको छ । अल्पविकसित देशहरूमा भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी डाइबेटिक रेटिनोपेथीबाट अन्धोपन भएको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा नहुनुका साथै समयमै रोगको पहिचान र उपचारमा ढिला हुनगएकोले हो ।
डाइबेटिक रेटिनोपेथीको उपचार गम्भीरता अनुसार लेजर पद्धति, आँखाको भित्री भागमा औषधि पुर्‍याउने विशेष खाले सुई र शल्यक्रियाद्वारा गरिन्छ । डाइबेटिक रेटिनोपेथीको उपचार ढिला हुनगएमा उपचारपश्चात पनि राम्रो दृष्टि फर्काउन सकिँदैन । अत: रोगको समयमै पहिचान र उपयुक्त उपचार गर्नसके दृष्टि बचाउन सकिन्छ ।
रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा राख्ने, उच्च रक्तचाप र रगतमा चिल्लोको मात्राको उपचार र नियन्त्रण गर्ने, गर्भावस्थामा कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक रेटिना परीक्षण गर्ने, धूमपान र मध्यपानबाट बच्नुका साथै मृगौलाका बिरामीले नियमित आँखा परीक्षण गराउनुपर्छ ।
वर्षमा एकपटक आँखा परीक्षण गराउनु पर्छ । डाइबेटिक रेटिनोपेथी भइसकेका बिरामीको रोगको गम्भीरता अनुसार नेत्र चिकित्सकको सल्लाहमा आँखाको परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । मधुमेहका बिरामीमा देखिने अन्य आँखाका समस्यामा मोतीविन्दु, जलविन्दु, आँखाको नसाको समस्या, सुक्खापन र संक्रमणका समस्या मुख्य हुन् ।
थापा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानकी नेत्ररोग तथा रेटिना विशेषज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:३८